Xukuumada Soomaaliya oo ansixisay Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta – Kalfadhi
Fadhigii Golaha Wasiirrada ee xukuumada Soomaaliya oo uu shirgudoon ka ahaa Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa maanta Ansixiyay Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta.
Siyaasadaan ayaa ah qorshaha Siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta oo lagula xisaabtamayo hey’adaha ka hawl gala Soomaaliya, laguna ogaanayo hawlaha ay qabtaan oo wasaaradda qorshaynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ay horay ugu soo gudbisay golaha wasiirrada.
Arrimo kale oo la xiriira amaanka,siyaasadda iyo dhaqaalaha 2040 ayaa looga hadlay shirkii maanta.
Xeerkaan ayaa sugi doona in ay meel mariyaan xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa shirka diirada lagu saaray Sharciga hanti-dhawrka, siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta iyo Soo noolaynta barnaamijka waciyi-gelinta qaranka.
Caqabadaha Hortaagan Dhismaha Guddiga Adeegga Garsoorka